Inflation Yakakwira Zvishoma Muna Ndira
Kukadzi 16, 2011
Kupera simba kwemari, kana kuti inflation, kwakakwira kusvika pa3.3% mumwedzi waNdira, kubva pa3.2% muna Zvita. Sangano reNational Statistical Agency rinoti izvi zvakakonzerwa nekukwira kwemitengo yezvekufambisa, zvekudya pamwe nemari yekubhadhara dzimba dzekugara.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kusagadzikana kwezvinhu munyika munyaya dzezve matongerwo enyika, kunogona kunge kuine chekuita nekukwira kweinflation uku. Nyanzvi idzi dzinoti pakasatorwa matanho ekuimisa, inogona kuramba ichikwira mwedzi nemwedzi.
Sachigaro weNational Advisory Council yeZimbabwe National Chamber of Commerce, VaLuxon Zembe, vanoti kukwira kwemitengo yemafuta pasi rose pamwe nekutengwa kwezvinhu zvekushandisa munyika kubva kuSouth Africa, zvimwe zvezvinhu zviri kukwidza inflation.